News Collection: साथीले जबरजस्त गरेपछि नाई भन्न सकिन
नेपाली चलचित्रमा नयाँ-नयाँ अनुहारहरु आउने क्रममा अहिले एक नव नायिकाको आगमन भएको छ । प्रवेश भएको छ । चलचित्र दुलहीरानी मार्फत नेपाली रजतपटमा भित्रिएकी नायिका हुन् पेश्ला कट्वाल । सिनेमा क्षेत्रमा आएको छोटो समयमा नै उनको व्यस्तता वढेको छ । उनले चलचित्र ‘थ्यांकु’ र ‘प्ले गल्र्स’मा अभिनय गर्नेतयारी गरिरहेकी छिन् । पाँच फिट ६ ईन्च अग्लि नायिका पेश्ला कट्वालसँग अनलाइनखवरका लागि विजय आवाजले गरेको कुराकानीः
नामको अर्थ ?
सवैले सोध्छन् मलाई उत्तर नै थाहा छैन ।
तपाई कस्तो मान्छे हो ?
म अरु भन्दा फरक छु । जति पनि कलाकार नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा छन् ति सवै भन्दा म फरक छु जस्तो लाग्छ ।
मिठो पकाउने खानेकुरा के हो ?
म मासु मिठो पकाउँछु ।
फिल्म खेल्न कसैले सेक्सको प्रपोज गरेका छन् ? गरे भने के गर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन । यदि कसैले गर्‍यो भने सिधै झापड हान्छु ।
मनपर्ने सेलीव्रेटी ?
ऐश्वर्या राय र रणविर कपुर
डेट जान मन लागेका पुरुष ?
कोहीसँग पनि जाने ईच्छा छैन ।
चुम्वन गर्न मन लागेको पुरुष ?
घुम्न मन लागेको देश ?
सेक्स के हो जस्तो लाग्छ ?
प्राकृतिक चिज हो ।
सेक्सको अनुभव छ ?
व्लु फिल्म हेर्नु भएको छ ? मोवाइलमा छ ?
हेरेको छु । एक पटक साथीको आग्रहलाई नकार्न नसकेर हेरेको थिए । मेरो मोवाईलमा भने छैन ।
हेर्दा कस्तो फिल आयो ?
मलाई त लाज लाग्यो ।
सेक्स विहे अघि कि पछि ?
विहे पछि मात्र ।
सेक्स प्रपोज आएको छ या छैन ?
आएको छैन ।
सिनेमा रहर कि पेशा ?
पेशा हो मेरो ।
सिनेमामा कति सम्मको दृश्य दिन सक्नु हुन्छ ?
कथाले मागेमा वेड सिन पनि दिन्छु ।
अंगप्रदर्शन कति सम्म गर्ने ? टु पिस लगाउने कि नलगाउने ?
नेकेट त दिन्न, तर टु पिस दिन सक्छु ।
एक्लै हुँदा सेक्सको वारेमा कत्तिको सोच्नु हुन्छ ?
म त्यस्तो सोच्दिन ।
कस्तो पुरुषले आकर्षण गर्छ ?
उचाई भएको, फिगर राम्रो भएको ।
तपाईलाई कस्तो सिनेमा खेल्ने रहर छ ?
नारीलाई समेट्ने सिनेमा खेल्ने रहर छ ।
आफ्नो सेक्सी अंग कुन लाग्छ ?
दर्शकले जुन भन्नुहुन्छ, त्यही नै हो ।
अनी अमेरिका जाने ईच्छा छैन ?
एक चोटी मात्र पुग्ने ईच्छा छ । घुम्नका लागि मात्र जान मन लागेको छ ।
अमेरिका गएर के गर्न मन लागेको छ ?
विश्वकै धनि र विकसीत राष्ट्रको रहनसहन हेर्न मन लागेको छ ।